युवा जागरण अभियान देशभित्रै स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार विरुद्ध खवरदारीमा जोड - Marganugami Daily
Marganugami Daily Headline2 Politics युवा जागरण अभियान देशभित्रै स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार विरुद्ध खवरदारीमा जोड
युवा जागरण अभियान देशभित्रै स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार विरुद्ध खवरदारीमा जोड
सिरहा, १२ चैत्र । नेपाली काँग्रेस निकट युवाहरुले सुरु गरेको मेची महाकाली युवा जागरण टोलीले २ नं. प्रदेश प्रवेशको प्रथम पल्ट सिरहा जिल्लाका युवा तथा पार्टीका नेताहरु अन्तकृया गरेको छ ।
बाम शक्तिबाट जनताले सोचे अनुसारको काम हुन नसक्ने प्रदेशसभा सदस्य नरेश यादवले बताए । ‘घण्टै पिच्छे बामगठबन्धन का नेताहरुको बोली फेरिन्छ । उनीहरु आफैले बोलेको कुरा यकिन हुँदैन जस्तो लाग्यो, प्रदेश मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वास का मत प्रसंग कोट्उदै उनले भने,‘बामपन्थी शक्तिले रातारात निर्णय फेरिर हामीसँग धोकाधरी ग¥यो ।
राजपाले उपराष्ट्रपति र फोरम नेपालले उपसभामुख पाउने नाउँमा मधेशको बलिदानीलाई दाउमा लगाउन खोजेको योजना विफल भएको बताए । उनले दुबै पार्टीले मधेशका समस्यालाई थाती राखेर पदीय प्रलोभनमा बाम शक्तिसँग सहकार्य गर्न खोजेको आरोप लगाए । बाम शक्तिको बोली र मधेशवादीको व्यवहार नसुर्धेका कारण यी दुई शक्तिले जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरे । यस्ता दोधारे प्रवृतिका शक्तिहरुबाट अलगै रहन उनले परिवर्तनकारी शक्तिसँग आग्रह गरे ।
पार्टीगत, व्यक्तिगत र सामुदाय विषेशको स्वार्थलाई त्यागेर कामको थालनी गरियो भने नेपालमै रोजगारीको धेरै सम्भावना रहेको युवा जागरण अभियानका संयोजक चिन्तन पौडेलले बताए । ‘रोजगारीमा खाडी मुलुक गएकाहरुको दिनका दिन एकपछि अर्कोको लाश आउने क्रम बढेको छ । रोजगार नपाएर युवा शक्ति विदेश जानु परेको बाध्यता छ, उनले भने,‘देशमै भएको सम्भावनालाई प्रयोगमा ल्याउन युवाहरु आफै जागरुक हुनुपर्छ । राज्य र नेताहरुको मनोपोली कार्यलाई रोक्नुपर्छ ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यको सेवा स्तर खस्किनुका साथै रोजगारमुलक उद्योगहरुको अवस्था जीर्ण बनेका कारण युवाहरुले खवरदारी मार्फत राज्यलाई जागृत गराउदै सुधार ल्याउने गरी क्रियाकलाप गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । युवाहरुको सक्रियताले राजनीतिक परिवर्तन भएको औंल्याउदै उनले भएको परिवर्तनमा युवाहरुले अवसर पाउनुपर्ने माग गरे । जारी अभियान देशभरी संचालन भएर यसको अन्तिममा समिक्षा गरेर सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी बोध हुने कार्यदिशा लिइने उनले थपे ।
भ्रष्टाचारी, दोधारे प्रवृति, स्वथ्यता, शिक्षाका लागी देशभित्रै आजादीका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने युवा जागरण अभियानका सिरहा संयोजक डा.सुभाषचन्द्र यादवले बताए । ‘चुनावमा हारजित हुन्छ, उनले भने,‘आफु हारजितका लागि चुनाव लडिन । ‘म सँग विचार छ जुन दिन चुनाव जितिन्छ त्यो दिन विचार लागु भएर आउछ । भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई र कानूनको अधिनमा रहेर विपन्न गरिव तथा अन्य जनताको हितमा काम गर्ने मसँग विचार रहेको छ ।
केही नेताहरु जनतासँग धोकाधरी गरेको छ तर जनताले नेतालाई सधै साथ नै दिएका छन्, उनले भने,‘ मसँग भएको बिचार जुन दिन जनताले बुझ्छ त्यो दिन विचार लागु हुन्छ । मलाई जनताले अश्वय जिताउछ । आफु भाषण भन्दा बोलेको कुरालाई व्यवहारमा लागु गर्ने व्यक्ति भएको उनको दाबी छ । सही शासन व्यवस्था अनुसार शासन पद्धति बस्यो भने कसैलाई कुनै कामको लागि अरुको मुख ताक्नु नपर्ने उनको दाबी छ । उनले यदि कसैले प्रक्रिया अुनसार हुने कामलाई रोक्ने प्रयास गर्छ भने सबैले मिलेर त्यसलाई सही ट्याकमा ल्याउन लाग्र्नुपर्ने सुझाव पेश गरे ।
भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ भन्दा ताली आउछ तर मुक्त कसरी हुन्छ ?, उनले भने,‘भ्रष्टाचारमुक्त गर्न आपैmबाट अभियान सुरु गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त र जनताको हितमा राज्यको सेवासुविधाका लागि युवा जागरण अभियान सुरु गरिएको उनले तर्क गरे ।
देशबाट राणा, राजा तथा राजतन्त्र गयो तर भ्रष्टाचारी प्रवृतिले स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा रोजगार, कृषि, उद्योग, सिचाई, सडकको अवस्था दिनानुदिन जीर्ण र झुर्र हुँदै गएको उनले बताए । अर्बौ–अर्व रकम खर्चिएपनि भ्रष्टाचारी प्रवृतिले जडा गाडेका कारण अवस्थामा खासै परिवर्तन नआएको उनले दाबी गर्दै भने,‘राजनीतिक व्यवस्थाले हाल्न संघर्ष गरिए जस्तै भ्रष्टाचारी प्रवृतिलाई फाल्न सबैले लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचारी प्रवृतिमा सुधार आयो भने देशको आधा भन्दा बढि समस्या आफै समाधान हुने उनको दाबी छ ।
यो वा त्यो वहानमा नलागेर युवा शक्तिलाई देशभित्रै रोजगार र वर्तमान अवस्थाको भ्रष्टाचारी प्रवृतिलाई सुधार ल्याएर विधिको शासन व्यवस्थाको प्रक्रिया बसाल्न युवाहरु एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने उनले तर्क गरे । नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा भएको भौतिक उपलब्धतालाई दिगोपना प्रदान गर्न मर्मत र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उनले भने ।
सामुदायिक विद्यालय हुँदा–हुँदै नीजि विद्यालयमा विद्यार्थी दिनुपर्छ, किन ? अस्पताल छ । भवन,डाक्टर र मेसिन पनि छन् तर उपचार छैन् किन ?, उनले भने,‘सबै कुरा भएपनि राम्रो शासन व्यवस्था नभएको कारण अस्तव्यस्तता छन् । जुनसुक्कै पार्टी र शासन व्यवस्था आयोस तर जनतालाई अब ठग्न नसक्ने उनले दाबी गर्दै भने,‘जनता जागृत भइसकेको छ । जागृत भएको जनतालाई सही तरिकाले अगाडि बढ्न टोल–टोल र बस्तीस्तरमा युवाहरु परिचालित भएर निकास तथा व्यवस्थित विकासका लागि अग्रसरतालाई कायम राख्नुपर्ने उनले बताए ।
सिरहा क्षेत्र नं. ४ का क्षेत्रीय सभापति नागेश्वर भुडेर यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बुद्धिजीवी राजदेव यादव, जिल्लाका वरिष्ठ नेता जगतलाल यादव लगायतले समाज र शासन पद्धतिलाई सही दिशा दिन युवाको भुमिका दर्साउदै आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेको थियो भने अभियानको सफलता तथा सहभागीमा स्वागत मन्त्वय युवा नेता तथा सिरहा नगरपालिका वार्ड नं.१का वडाध्यक्ष महेश कुमार यादवले दिएको थियो ।